EURO 2016, HORUDHACA: Wales v Northern – Labada Xul Oo Caawa Ciyaaari Doona Kulanka Loo Yaqaano UK Derby – Northern Ireland Kama Badin Wales Tan iyo 1980-kii | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » EURO 2016, HORUDHACA: Wales v Northern – Labada Xul Oo Caawa Ciyaaari Doona Kulanka Loo Yaqaano UK Derby – Northern Ireland Kama Badin Wales Tan iyo 1980-kii
EURO 2016, HORUDHACA: Wales v Northern – Labada Xul Oo Caawa Ciyaaari Doona Kulanka Loo Yaqaano UK Derby – Northern Ireland Kama Badin Wales Tan iyo 1980-kii
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 25-06-16 7:18 AM Chris Coleman ayaa guul ka rajeynaya kulanka adag oo ay Wales ku wajahayaaan Northern Ireland wareega 16ka Euro 2016 magaalada Paris caawa,
Wales ayaa gaaray wareega isreeb-reebka, ka dib markii hogaanka Group B, ay kusoo baxeen, halka Northern Ireland lagu soo xushay mid ka mid ah afarta xul ee ugu fiican kaalinta seddexaad,
Turkey ayaa filan karay inuu wajaho Wales, laakiin way hareen kadib markii Republic of Ireland,ka badiyeen xulka Italy.
“Northern Ireland waxay ka dhibaato badan yihiin Turkey,” ayuu yiri Coleman. “Waxay ciyaraaan kubad weerar dhaqsiyo badan ku dhisan,Taasi waa meesha xooggoodu yahay ayuu hadalkiisa raaciyay,
“Waxa ay si cajiib ah usoo abaabulaan daafac si aan gool looga dhalin, Waxaa jira khataro iyo caqabado markasta laga filann karo iyaga,
Labada xul ee Wales iyo Northern Ireland ayaa ka soo muuqanaya koobka qaramada Yurub markii ugu horeysay.
Kulankii ugu dambeyay labada xul ayaa barbaro 1-1 ah, ciyaar saaxiibtinimo ay ku galeen magaalada Cardif bishii March, Gareth Bale ayaa dhaliyay goolka wales.
Bale ayaa dhaliyay saddex gool Euro 2016, iyadoo Northern Ireland weeraryahankeeda Kyle Lafferty yiri: “Bale waa ciyaaryahan hal ah- lakiin waxaa rumeysanahay in difaaca ugu fiican tartanka aan heysano.
“Uma maleynayo in iyagu markasta guul filan karaan,Waxa uu noqon doonaa kulan adag, laakiin waxaan rajeynayaa ugu damben in aan wadad guusha kusii socano.”
Labadaan xulk midkii soo gudbaa ayaa wahihi doonaa Hungary ama Belgium midkii kasoo baxaa marxalada wareega quarter-finalka.
Kulanka: Wales v Northern Ireland
Saacada: 7:00 Fiidnimo
Garoonka:Parc des Princes
Ma jiraan wax dhaawac cusub ah oo labada dhinac wajahayaan kulanka caawa.
Sam Vokes iyo Hal Robson-Kanu ayaa kusoo bilaaban doona afka hore ee Wales, labadaba daqiiqado wanaagsan ayay ku qaateen kulamadii wareega group-yada.
Tababaraha xulka Northern Ireland Michael O’Neill ayaa magacaabay line-up isku mid ah, Labadii kulan ee ugu danbeyay tartankaan.
Xaqiiqada Labada Dhinac
Northern Ireland kuma aysan guuleysan mid ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeyay ay wajaheen xulka Wales (D4 4 guuldaro). Guushii ugu danbeysay May 1980 ayay (1-0 Cardiff) kaga badiyeen, Waa kulanka ugu horeeyay ee u dhexeeyay labada xul isreebreebka koob weyn.
Wales ayaa 58 sano kadib markii ugu horeysay tartan caalami ah ciyaareysa, halka Northern Ireland, muuqaalkoodii ugu horeeyay marxaladaaan uu yahay